Qiiq sun ah oo mar kale Delhi qarqiyay kaddib ciidda Diwali | Saxil News Network
Qiiq sun ah oo mar kale Delhi qarqiyay kaddib ciidda Diwali
November 8, 2018 - Written by editor
Image captionDadka ayaa saakay ku waabariistay magaalada oo uu qariyay qiiq sun ah
Wasakhowga hawada ee caasimadda Hindiya ayaa gaaray heer aad u xun kaddib markii ay dadku iyagoo u dabaaldegaya ciidda Diwali rideen bulalayr, taas oo ay maxkamad hore u mamnuucday.
Dadka ayaa saakay ku waabariistay magaalada oo uu qiiq sun ah daboolay.
Maxkamadda sare ee Hindiya ayaa xilli go`an u qabatay in la rido bulalayrka keliya labo saacadood habeenkii, balse amarkaas ayaa si cad loo jebiyay.
Diwali, oo ah feestada ugu muhiimsan ee Hindida waqooyiga dalkaasi ku dhaqan, ayaa waxay u dabaaldegaan guushii uu wanaaggu ka guuleystay xumaanta sida ay aaminsan yihiin.
Habaas daboolay Delhi
Unicef: hawada wasakhaysan maskaxda carruurtay dhaawacdaa
Cayaar loo joojiyey qiiq wasakhaysan dartiis
Wararka ayaa sheegaya in qiiqaasi uu saameyn ku yeeshay dadka, iyadoo marka ay neefsadaan uu u gudbo sambabbada.
Safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ayaa barteeda Twitter-ka ku qortay in cabbirka hawada tayada leh ee Delhi uu hoos ugu dhacay 526, iyadoo wasakhowga hawada ee magaaladaasi ku sheegtay mid aad u daran taas oo khatar caafimaad u leh dadka magaalada.
Bishii la soo dhaafay, Maxkamadda Sare ayaa sheegtay inay dooneyso inay ogaato in haddii la mamnuuco bulalleerka ay atasi isbeddel ku sameyn karto hawada Delhi, oo loo aqoonsaday mid ka mid ah kuwa ugu xun dunida.
Image captionInkastoo ay xayiraad jirto, dadka magaalada ayaa ridayay bulalayka saqdii dhexe Arbacadii
Balse inkastoo ay jirto labada saac ee loo qabtay in la rido bulaleerka habeenka dabaaldegga, haddana dadka ku nool Delhi ayaa sii ridayaya bulaleerka ilaa saqdii dhexe.
Dadka ayaa baraha bulshada ku wadaagay dareenkooda ku aaddan dadka oo jebiyay amarkii maxkamadda.
Xuquuqda Sawirka @swarup58@SWARUP58
Qaar kale ayaa sheegaya inay caddaalad darro tahay in bulaleerka loo aaneeyo wasakhowga hawada, balse sidoo kale jawiga dabeysha oo hooseeya, busta ka soo kacda goobaha dhismuhu ka socdo, gubidda khashinka iyo qiiqa ay gawaaridu sii daayaan ay saameyn ku leeyihiin wasakhowga hawada.
Sidoo kale, tayada hawada ayaa ka sii darta sanad walba bilaha November iyo December iyadoo beeralleyda gobollada deriska la ah Dehli ee Punjab iyo Haryana ay gubaan cawska si ay beerahooda u nadiifiyaan.
Xuquuqda Sawirka @karanbhasin95@KARANBHASIN95
Caasimadda Hindiya ayaa noqotay meesha ugu xun dunida ee wasakhowga hawada, sida uu sheegay Ururka Caafimaadka Adduunka ee (WHO)
Qorshe ay dowladdu waddo ayaa lagu doonayaa in wax looga qabto arrintaasi, wuxuuna qorshahaasi mamnuucayaa arrimaha uu ka midka yahay gubidda khasinka.O).